Anisan’ny nampiavaka azy raha ny nambarany omaly ny fahaizana mipetraka afovoany hatrany na dia teo aza ny krizy nolalovan’ny firenena. Nandao io andraikitra io ny tenany omaly taorian’ny nanendrena ny jeneraly Ravalomanana Richard ho sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena vaovao. Fanamby maro no napetrak’ity tompon’andraikitra ity ho fanasoavana ny vahoaka sy hamerenana indray ny hasin’ny zandarimariam-pirenena. Anisany ny ady amin’ny kolikoly, indrindra ny fidirana ho mpianatra ho zandary. Hofoanana ihany koa ny fisian’ireo zandary tsy mbola misotro ronono nefa efa tsy miasa sahady, handoavana karama isam-bolana. Tsy hisy intsony ihany koa ny fifandonana amin’ny hery hafa. Anisan’izany ny polisy, ny miaramila. Hisy mantsy raha ny nambarany ny fivoriana iarahana amin’ireo tompon’andraikitra voakasika hanatsarana ny fihavanana. Nambarany fa tsy ny tenany no hanam-pikasana ny hanafoana ny zandarimariam-pirenena, resabe nandeha tany aloha tany. Ny zandary aza raha ny nambarany no tena miasa indrindra satria sady mikatroka eto an-drenivohitra no manao izay tratry ny heriny any ambanivohitra.